I-oven convection iyisetshenziswa sokushisa esihlanganisa ukushisa okushisayo nokunyakaza kwemoya. Ukushisa kuyenziwa ngosizo lwezinto zokushisa. Njengomthetho, ama-oven convection asetshenziselwa imikhiqizo yokubhaka ibhaka. Amamodeli amancane afakwe amathreyi okubhaka, amakhulu - cha. Ngokwenza njalo, emabhizinisini ane-assortment encane kanye nezinga elincane, lisetshenziselwa yonke indawo - ngakho-ke, lisetshenziswe njenge-gastronomic kanye ne-bakery.
Ama-oven convection ahlukaniswe:
Ngomthamo: 4, 6, 10 amathreyi.
Ngokwesayizi wereyi: 435x315 mm, 342x242 mm, 600x400 mm.
Nge-humidification ye-steam futhi ngaphandle kwe-steam humidification.
Ake sibheke ngokucophelela ukuqhuma kwe-steam. Ukwenyuka kwe-steam ekwenzeni izivunguvungu kuyadingeka ikakhulukazi ekubheni imikhiqizo yemvubelo. Ngakho-ke, emva kokufakazela ukuthi, imikhiqizo yemvubelo ingena ekamelweni elifudumele le-oven convection ngenomoya oshisayo owomile, ngokushesha kusuka emkhathini womkhiqizo, umswakama uqala ukukhiqizwa ngamandla, ngaleyo ndlela yakha i-crust. Ukukhuphuka okuzoholela ekugqibeleni, ngoba umkhiqizo uzokwanda usayizi ngesikhathi sokubhaka. Ukuze ugweme lokhu, emaminithini amahlanu okuqala wokubhaka, i-steam ingeziwe ekamelweni lokusebenza, ngaleyo ndlela igweme ukubonakala kwe-crust, futhi umkhiqizo ubhakwa ngokulinganayo. Futhi ukulungiswa kwemikhiqizo enhle futhi efanelwe kuyaphakanyiswa ukufaka amathrekhi okubhaka ngezinga, isb. Uma isitofu sakho senzelwe ama-baking ama-baking angu-4, ubhake kangcono ngesikhathi esifanayo 2. Futhi ezinhlobonhlobo eziningi kuya kumazinga angu-6 ayikho ukulawulwa kwejubane noma ukujikeleza okuphelele. Ngale ndlela, imikhiqizo encane, ngokwesibonelo, njenge-profiteroles, ingahlakazeka ikhamera. Futhi, ikhekhe lesiponji elilungiselelwe ngokwendlela yokupheka yendabuko ngaphandle kwe-baking powder, ingabuye iwele ngenxa yokunyakaza kwemoya. Kuzo zonke ezinye imikhiqizo, i- oven convection yokubhaka ilungile.
Indlela yokunquma ubukhulu betreyi yokubhaka
Ukuze wenze lokhu, udinga ukubala inani elilinganiselwe lezinto ezizobekwa ngokubheka ukuthi uzofaka itreyi yokubhaka ngeyodwa, futhi nokuthi zingaki izinto zakho ongayifaka ku-tray yokubhaka. Njengomthetho, ama-oven convection afakwe kwizingqikithi ezivaliwe . IKhabhinethi yokunikezela ibuye kabili kakhulu njengehhavini, ngoba ukufakazela ukuthi kunesikhathi eside kunesikhathi sokubhaka. Ukuze unqume ukuthi udinga ukufakazela ubufakazi noma cha, udinga ukwazi uhla lwezinto ezibhaka. Njengamanje, i-pre-baked 70%, ilandelwe imikhiqizo efriziwe. Udinga ukucacisa nomphakeli wakho ukuthi ngabe kunesidingo sokufakazela imikhiqizo enjalo, iningi aludingi ukufaka ubufakazi. Uma wenza imikhiqizo ngokwakho, futhi kukhona izinhlobonhlobo zemvubelo kuzo, awukwazi ukwenza ngaphandle kobufakazi, kuyinkqubo ephoqelekile, ngoba ikuvumela ukuba uthole umkhiqizo ongcono.
Uma ihhavini yakho yokuvumbulula ixhumano nomkhumbi wamanzi, qinisekisa ukuthi ixhunywe kuyo ngokusebenzisa i-shutter ye-hydraulic, ngoba uma kungekho mgibe we-hydraulic, izobe ingena egumbini lokubanda elimnyama futhi imikhiqizo izobe ibhakwa ngokungalingani, umqoqi wemikhiqizo uyohluka.
Uma ufuna ukusebenzisa i-oven convection njenge-oven jikelele, i.e. Ukupheka kuyo imikhiqizo ye-gastronomic, khona-ke uzodinga ukuthenga isikhunta sokubhaka, ngoba iningi lama-oven convection anezinhlayiya zokubhaka ngehlangothini elingaphansi, alikho ngaphezu kwama-5 mm. Ngokwehlukana, kungenzeka ukwenza amathreyi okubhaka ngebhedi ephezulu, kodwa akunakwenzeka njalo ukuba uwafake ekamelweni lokusebenza, njengoba kungekho ibanga elanele phakathi kwama-rails. Ukuba khona kwe-steam humidification ngeke kukuvumele ukuba upheke emagumbini wokuthutha, ngoba kuwo, njengomthetho, umjovo wokujola usetshenziswa.
Kuze kube yamuva, u-Unox wayengumholi ekukhiqizeni nasekuthengisweni kwe-oven convection eRussia. Lo mkhiqizi unezinhlobonhlobo eziningi zezinto zokuvotela, lezi zitsha zibhekwa ngokuthembeka okuphezulu, ukukhiqiza futhi ngesikhathi esifanayo zihlala endaweni encane. Kodwa esimweni esisha sezomnotho nokungazinzile kwesilinganiso sokushintshaniswa, amanani ezitofu avuke ngokuqinile. Kuze kube manje, eRussia, ama-oven convection akhiqizwa yi-Abat athola ukuthandwa. Amafomu alo mkhiqizi akasoze aphansi kunabo bonke abase-Italiya, wonke umugqa wefomethi uvuselelwe ngokuphelele kamuva. Uhla olunwetshiwe kakhulu lwezinhlobo zamafane. Ngaphezu kwalokho, lezi zitsha zinenani lentengo.
Isakhiwo senhlangano: izici namaqembu amakhulu
Inqubo ye-bankruptcy kanjani? Ubuso? Ungaqala kanjani inqubo?
Amafomu Ezomthetho Wezemisebenzi Yomsebenzi Wezohwebo
Winter jackets Clasna: ukubuyekezwa, umkhiqizi